Kilaboota rammaddi B magaalaan Jimmaa duursaa jira
Friday, 26 May 2017 13:24
Finfinnee, Caamsaa 18,2009 (oromiapo) -Taphoota ligii olaanotiin magaalaan Jimmaa injifatee ammas dursummaa isaa kan garee B cimseera.
Magaalaan Shaashamannees sadarkaa isaa gara 3ffaati fooyyesseera.
Tapha torbee 25ffaatiin, Kafaatti imaluun Buna Kafaa waliin kan morkate magaalaan Jimmaa galchii 1f 0n injifateera.
Magaalaan Shaashamannees garee B keessatti kan argamuu magaalaa Walqixxee keessummeessuun 2f 1n injifateera.
Liigiin olaanoo xumuramuuf kanaan booda taphoota 5 qofatu hafa.
Rammaddii lamaan keessaa kilaboonni sadarkaa 1ffaa ta'uun xumuran lamaa fi garee keessaa sadarkaa 2ffaatin kan xumuran waliin taphatanii kan injifate darbuun,kilaba 3ffaa ta'udhaan gara priimiyar liigii Ityoophiyaatti ol guddatu.
Kilaboota rammaddi B jalatti argaman 16 keessaa kilabni magaalaa Jimmaa taphoota 25niin qabxii 48n dursaa jira.
Haaluma kanaan magaalaan Jimmaa qabxii 48n 1ffaa,Hadiyyaa Hoossaa’inaan qabxii 43n 2ffaa, magaalaan Shaashamannee qabxii 41n 3ffaadha.
Makuwaanint Mucee (FBC)
More in this category: « Shaampiyoonaan atleetiiksii riikardiin eegalame Mo’anii darbuun har’a taba tokko keessummeessera »
TV OROMIYA NOV-14-2016 Views : 3788
TV OROMIYA NOV-13-2016 Views : 31
TV OROMIYA NOV-12-2016 Views : 21
Torbe Kana 47564
Ji'a Kana 91405
01/05/07 irraa eggalee 7194274
Kan Amma Daawwachaa Jiran 61